စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်း | Real Conversion - 2010 | Real Conversion
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ (၃၀)ရက်၊ လော့(စ်)အင်ဂျလိမြို့၊တဲတော်နှစ်ခြင်း
အသင်းတော်၌ ဟောကြားသော ဒေသနာ။
"ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မရောက်ရကြ။" (ရှင်မဿဲ ၁၈း၃)
ယေရှုဘုရား ပွင့်လင်းတိကျစွာ မိန့်တော်မူသည်ကား အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောသူမှ တစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရကြ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုဘုရား ပွင့်လင်းတိကျစွာ မိန့်တော် မူသည့်ထားသည့်အတိုင်း မိတ်ဆွေ၏အသက်တာသည် အသစ်တဖန်ပြောင်း လဲရမည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် ပြောင်းလဲသောအသက်တာမရှိပါက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားရမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကနေ့မနက် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော သူတို့၌ မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို မိတ်ဆွေတို့အား ပြောလိုပါသည်။ စပါးဂျွန်ပြောကြားသည်မှာ မိတ်ဆွေ၏ ယုံကြည်ခြင်းအမြင်အတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ ယုံကြည်ခြင်းသည် အဆင့်၊ တဆင့်ပြီတဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ (စီ-အိပစပါး၏ ဗမသကညိ အ့န Wငခုနအ Gအေန တက္က်ဆက်ပြည်နယ်၊ ပီကရင်မ်စာပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၉၂-စာ၅၇) ထုတ်ဝေသည်။
I. ထမအဆင့်မိတ်ဆွေသည်အခြားအကြောင်းကိစ္စကြောင်း ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိ လာခြင်းထက်ပို၍ မိတ်ဆွေ၏အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ရမည်။
လူတိုင်းလိုလိုပင် မိမိတို့၏အသက်တာအစောပိုင်းကို မှားယွင်းသောအကြောင်းကိစ္စအတွက် ဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ "အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူး တော်" ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသောမစ္စတာ ဂရိဖစ်လည်း ထိုနည်းတူဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသူတို့ကဲ့သို့ မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြသည်။
ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက အိမ်ဘေးနားကပ်ရပ်မိသားစုများ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ထိုမိသားစုတို့နှင့် ဘုရားကျောင်းကို သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် အထီးကျန်ဆန်နေပြီး အိမ်နားကပ်ရပ်မိသားစုတို့၏ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်းကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာသည် စစ်မှန်မှန်ကန်သော အကြောင်းအရာကို သိလိုသောငှါ ဘုရားကျောင်းကိုရောက်ရှိတာ ဟုတ်ပါ့မလား ၊ ပထမအကြိမ် ဘုရားကျောင်းရောက်တုန်းက ဒေသနာတော်အဆုံး နိဂုံးမချုပ်ခင် ကြားလိုက်ရသောတရားစကား ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူပြီး ဘုရားကျောင်းကို ဆက်လက်၍ သွားခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့် ယနေ့ ကျွန်တော်ဟာ နှစ်ခြင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော် အသစ်တဖန် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အသစ်ပြောင်းလဲချင်လို့ ဘုရားကျောင်းကိုသွားတာမဟုတ်ဘဲ။ အိမ်နားကပ်ရပ်မိသားစုတွေရဲ့ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁ ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ဒေါက်တာချားစ်ဂျေဝူးဘရိတ်၏ အိုင်အိုလာကောလိပ် (အခုဆိုရင် ဘိုင်အိုလာတက္ကသိုလ်)၌ ဟောကြားခဲ့သော ဒေသနာတော်ကို နောက်ဆုံးကြားပြီး အသက်တာပြောင်းလဲမသွားခင် ကျွန်တော်သည် ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံး မောပန်းစွာဖြင့် ဘုရားကျောင်းကို သွားခဲ့တာဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေ သင်ကောဘယ်လိုနည်း၊ ကလေးသူငယ်မို့ မိဘများကတွဲခေါ်၍သာ ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ဖြစ်တာလား၊ သို့မဟုတ် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေ၍ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရောက်ဖြစ်တာလား၊ အကယ်၍မိတ်ဆွေသည် မိမိ၏အမူ အကျင့်ထဲမှ မပြောင်းလဲဘူးဆိုလျှင် ကလေးကဲ့သို့ ဆရာဆရာမများ၏ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းခံဖို့ ဘုရားကျောင်းသို့ ရောက်ရှိသည်မှန်လျှင် မိတ်ဆွေသည် စစ်မှန်ပြောင်းလဲသောလူသစ်ဟု မဆိုနိုင် သေးပါ။ မိတ်ဆွေသည်လည်း ကျွန်ုပ်၏အသက်တာဟောင်းကဲ့သို့ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန် ဆန်နေ၍သော်၎င်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖိတ်ခေါ်၍သော်၎င်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၏ နွေးထွေးသာယာခြင်းခံလို၍ ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ဖြစ်သလား၊ အကယ်၍ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို လျှင် မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော်၌ အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဟု မခေါ်ဆိုနိုင်သေးပါ။ တလွဲ မယူကြ ပါနှင့်။ ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ အပြုအမူ မပြေင်းလဲသည်ပဲဖြစ်ဖြစ် အထီးကျန်ဆန်နေ၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွန်ခဲ့သော (၁၃)နှစ်သားအရွယ် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ယနေ့မိတ်ဆွေ ဤနေရာကို ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ထိုအရာများသည် ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိဖို့တွန်းပို့ ပေးသော အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအရာများက မိတ်ဆွေ၏ဘ၀အသက် တာကို အသစ်ပြုပြင် ၍မပေးနိုင်ပါ။ မိတ်ဆွေသည် ဧကန်အမှန် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုအတွက် အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း ရှိရပါမည်။
ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ အမူအကျင့်မပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၊ အထီးကျန်ဆန်နေ၍ ဘုရားကျောင်းကိုရောက်ဖြစ်သည်ပဲဖြစ်စေ၊ ယနေ့ မိတ်ဆွေတို့ ဤနေရာမှာ ရောက်ရှိက တည်းက လုံး၀မမှားတော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေသည် စိတ်သက်သာရာ ရရှိဖို့အတွက် ဘုရားကျောင်း ရောက်ရှိ တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စစ်မှန်သောအသက်တာ လူသစ်၊သတ္တဝါသစ်ဖြစ်ဖို့ ပြောင်းလဲလိုချင်သော စိတ်ရှိရ ပါမည်။
II. ဒုတိယအဆင့် ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိကြောင်းကို မိတ်ဆွေသိရှိရမည်။
မိတ်ဆွေသည် ဘုရားကျောင်းသို့မလာရောက်ခင် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိကြောင်းကို နား လည်ကောင်းနားလည်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သမ္မာတရားနှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းနှင့် ထိပ်တိုက်မတွေ့ခင် အချို့သောသူတို့၌ ဘုရားသခင်ရှိကြောင်း ခံယူချက်သည် မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ ဤနေရာသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် မှုန်ဝါးနေသောအရာများ ရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မည်။
မိတ်ဆွေသည် ဘုရားကျောင်း၌ ဆရာ^ဆရာမတို့၏ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းကို ခံယုလာပြီဖြစ်၍ ကျမ်းပိုဒ်တော်တော်များ သိနေလောက်ပါပြီ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ကျမ်းပိုဒ်များ ရှိတယ်ဆိုတာ ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရှာဖွေသိနေလောက်ပါပြီ။ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်း သိလောက်ပါပြီ။ ကျမ်းချက်တော်တော်များနှင့် ဓမ္မသီချင်းများများစားစား သိလောက်ပါပြီ။ သို့သော် လည်း ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေအတွက်တော့ မသေမချာမရှင်းမလင်း ဝေဝါးနေဆဲဖြစ်မှာပါ။
မကြာမီ မိတ်ဆွေသည် လူသစ်တစ်ဦး(သို့မဟုတ်) နို့ဆို့သူငယ်ဖြစ်နေပါစေ တစ်စုံတစ်ရာ မိတ်ဆွေ၏ အသက်တာ၌ ဖြစ်ပျက်လာတော့မှာပါ။ ထိုအခါ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ပြောရုံ သက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်း တကယ်ရှိကြောင်းကို စတင်၍ နားလည်းလာပါ တော့ မည်။ ဘရားသခင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကဲ့သို့ မိတ်ဆွေသိနားလည်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် အသက်(၁၅)၏နှစ်အရွယ် ကျွန်ုပ်အဖွားကိုမြေမြှပ်သင်္ဂြိုဟ်သည့်နေ့ သစ်ပင်တွေရဲ့ အောက်မှာ သချိုင်းကုန်းမြေပေါ်မှာ လဲကျတဲ့အချိန်မှာလည်း ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း သိနားလည်ခဲ့ပါသည်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်ုပ်အသက်တာ အသစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲတာတော့ မဟုတ်သေးပါ။
ထိုကဲ့သို့သော အတွေ့အကြုံ မိတ်ဆွေတို့ ကြုံဖူးပါသလား၊ သင့် အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ထင်ရှားဖူးပါသလား၊ ထိုအတွေ့အကြုံသည် အလွန်ပင် အရေးကြီးပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော်မူသည်မှာ
ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင် ၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည် ဘုရား သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကိုရှာသောသူအား အကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်း၊ ယုံကြည်ရ သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၆)။
ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း အတိုင်းအတာ ပမာဏတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေသည်။ ထိုအရာသည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မိခင် ပြောပြဖူးသည်မှာ "ဘုရားသခင် ကိုအမြဲယုံကြည်ပါသည်"။ ဟူ၍ဖြစ်၏။ အမေ၏အပြောအဆိုသည် ကျွန်ုပ်အဖို့ သံသယမေးခွန်း မေးရန်ပင်မရှိခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ အမေသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သူ ဖြစ် သည်။ သို့ပေမယ့် အသက်ရှစ်ဆယ်ပြည့်မှာပဲ အမေပြောင်းလဲလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမေရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက အရေးကြီးပေမယ့် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်း၊ လူသစ်ဖြစ်ရန် ပြောင်းလဲသော အထိ အတွေ့ အဖြစ်အပျက် ခံစားဖို့လိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ပြောပြလိုသည်မှာ ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်း မသိနားမလည်သော်လည်း ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်း သည်ကောင်းမွန်သောအလားအလာပင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်ခြင်းသော်၎င်း၊ အစောတလျင်သော် လည်းကောင်း မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်အမှန်တည်ရှိကြောင်းကို သိရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာ သည် ဒုတိယခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သေးပါ။
III. တတိယအဆင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ သင့်အပေါ် ၌ တည်နေသည်ကို သိနားလည်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော်မူသည်ကား ထို့ကြောင့် ဇာတိပကတိ၌ ကျင်လည်သောသူ (မပြောင်း လဲသူ)တို့သည် ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်ကြ။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောသူသည် ဘုရား သခင်၏ စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ဟု မိတ်ဆွေ နားလည်ရပါမည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်သားတစ်ဦး ဖြစ်နေသည်ကို အစဦးစွာသိရပါမည်။ စိတ်ခိုင်မာ၍ နောင်တမရသည်နှင့်အညီ အမျက်တော်နေ့ဖြစ် သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားစီရင်ရာနေ့၌ ကိုယ်ခံစရာဖို့ အမျက်ကိုသိမ်းဆည်းလော့။ (ရောမ ၂း၅)။ သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော်မူပြန်သည်ကား
ဘုရားသခင်သည် တရားသဖြင့် စီရင်သော ဘုရားဖြစ်၍ မတရားသောသူကို အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူ၏။ (ဆာလံ ၇း၁၁)။
ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီးနောက် သင်၏ပြစ်မှုကျူးလွန် နေခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်နေသည်ကို သိနားလည်လာမည်။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့မချစ်နိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်များ ကျူးလွန်ခြင်း သည် သူ၏အမိန့်ကို မနာခံခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ရာကျရောက်သည်။ ထိုအပြစ်အနာအဆာ သိရှိပြီးနောက် တွင် အမှန်တရားကို ရှင်းလင်းစွာ သိရလိမ့်မည်။ သိလာမည် ကြီးမားသောအပြစ် ကျူးလွန်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်း မချစ်နိုင်သည်ကို ။ ထိုထက်မကပါ မိတ်ဆွေ၏ စိတ်နှလုံးသား သည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေကြောင်း မိတ်ဆွေ၌ ကောင်းခြင်းတစ်စုံတစ်ရာပင် မရှိကြောင်း မိတ်ဆွေ ၏ဇာတိသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံကြောင်း မိတ်ဆွေစတင်၍ သိရှိလာပါလိမ့်မည်။
ပရိုတက်စတစ်ဂိုဏ်းဝင် (ဖြူရီတန်)များက ဒီအဆင့်သည် မကြာခဏဆိုသလို နိုးကြားခြင်း အဆင့်ဟု ခေါ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အပြစ်အကြောင်း လေးလေးနက်နက် တွေးတောခြင်းမရှိကြ။ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည်ဟူသော အသိမရှိဘဲ နိုးကြားပြီဟူ၍ မပြောနိုင်ပါ။ ဂျွန်နယူတန် သီကုံးရေးသားသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေခံစားဖို့လိုပါသည်။
"အိုအဖ ကျွန်ုပ်သည် မသန့်ရှင်းမစင်ကြယ်သောအရာနဲ့ ဖုံးအပ်လျက်ရှိ
အဘယ်ကဲ့သို့ အကျွန်ုပ် -သည် အပြစ်ဝန်ထုပ်နှင့် ညည့်နက်အမှောင်မှာ
စွန့်စားလှုပ်ရှားရနည်း။ ဆိုးညစ်သော အပြစ်ဒုစရိုက်များနှင့်
ပြည့်နှက်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ကိုယ်တော်ရှင် ကိန်းဝိပ်တော်မူပြီလား၊ အိုး နေရာ
အနှံ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်များ ရွေ့လျားလှုပ်ရှားနေသည်ကို အကျွန်ုပ်မြင်သည်။"(၁၇၂၅
မှ ၁၈၀၇ ဂျွန်နယူတန်၏ အိုအဖ အကျွန်ုပ်မသန့်ရှင်းသောအရာနှင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ)
မိတ်ဆွေသည် အတွင်းနှလုံးသားထဲက ဆိုးညစ်သောအပြစ်ဒုစရိုက်များကို နက်နက်နဲနဲ တွေးခေါ် စဉ်းစားဖို့လိုပါသည်။ အကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာနေသည်ကို သိဖို့လိုပါသည်။ ထိုအတွေးအခေါ်များက မိတ်ဆွေကို တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွေ့လျားစေမည် ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များနှင့် ဘုရားသခင်ကိုအကြွင်းမဲ့ မချစ်နိုင်သောစိတ်သည် မိတ်ဆွေအား စိတ်အနှောင့်အယှက် စိတ်မချမ်းမှုများ ဖြစ်စေပါမည်။ ဒီအဆင့်မှာ မိတ်ဆွေ၏ အေးတိအေးစက် အသက်နှင့်မပြည့်စုံသောနှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်ဆီသို့ ရွေ့လျားနေသော ကြောင့် စိတ်ပူလောင်သောကခံစားရပါလိမ့်မည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောနှလုံးသား၌ အသက်မတည် သည်ကို မိတ်ဆွေစတင်၍သိရှိဖို့လိုပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် ငရဲသို့ကျရောက်ရန် ထိုက်တန်သောသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားကိုချစ်သော်လည်း အပြစ်ကိုရွံမုန်းသောကြောင့် သင့်ကို ငရဲသို့ ကျရောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိရှိလာပါလိမ့်မည်။ သင်၏ဆိုးညစ်သောအပြစ်သည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်နေသည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသသည် သင့်အပေါ်၌တည် နေသည်ကို အမှန်တကယ်သိလာသည့်အခါတွင် မိတ်ဆွေသည် စဉ်းစားတွေးတော ဆင်ခြင်လာပါ လိမ့်မည်။ ဤနိုးကြားသောအဆင့်သည် အလွန်အရေးကြီးသောအဆင့်တွင် ရှိပါသည်။ သို့ပေမယ့် မိတ်ဆွေသည် အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲသည်ဟူ၍ မဆိုနိုင်သေးပါ။ လူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်သားဖြစ်နေပါသည်ဟူသော အသိတရားရချိန် မိတ်ဆွေသည် ပြောင်းလဲပြီဟူ၍ မဆိုနိုင်သေးပါ။ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဟူသည်မှာ မိမိသည် အပြစ်သားဖြစ်နေပါ၏လား သိရုံထက်မက ပိုပါ သည်။
နိုးကြားအသိရှိခြင်းက ခရစ်ယာန်များ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းခံယူယုံကြည်ချက်များ လေ့လာရုံ သက်သက်ထက် ကျော်လွန်ပြီး အပြစ်သည်ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင့်စော်ကားနေသဖြင့် သင်သည် ဘုရားသခင်ကို မကျေနပ်စေနိုင်ဟူသောအသိ ချက်ချင်းပင် မိတ်ဆွေနားလည်သဘောပေါက်လာပါ လိမ့်မည်။ မှန်ကန်သောနိုးကြားအသိရှိမှုက မိတ်ဆွေသည်အပြစ်ရှိကြောင်း မသန့်ရှင်းသော သူဖြစ်ကြောင်း အသိရစေပြီး ပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်(၄)ဖြစ်သော နောက်ဆုံးအဆင့်ထိ ပို့ဆောင် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ချာစ်စပါဂျန်သည် အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်ရောက်မှ မိမိ၏အပြစ်များ သိနားလည်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ဖခင်နှင့် အဖိုးနှစ်ဦးစလုံးမှာ တရားဟောဆရာများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ခေတ်ပေါ်အပေါ်ယံဆန်သောဆရာများက သေချာသောပြောင်းလဲမှု ရှိမရှိ မသိရဘဲ လူ့အမြင်အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုအပေါ်၌သာ ဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့် သူ့ဖခင်နှင့် ဘိုးအေတို့က စပါဂျန်အား သေချာနက်ရှိုင်းမှုမရှိသေးသောကြောင့် ခရစ်တော်အဖို့ သိမ်းသွင်းမည့်အစား ထိုသူတို့ သည် စေ့စပ်သေချာသောအသက်တာ ပြောင်းလဲလာစေရန် ဘုရားသခင်၏ စောင်မမှုကို စောင့်မျှော်ခဲ့ ကြသည်။ သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သည်ဟု ကျွန်ုfပ်ထင်ပါသည်။
စပါကျန်သည် အသက်(၁၅)နှစ် ပြည့်သောအခါ အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍အကျိုးအဆက်ကို နက်နဲစွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ စပါကျန်သည် သူ၏အပြစ်သားဘ၀ကို သိနားလည်သဘောပေါက် ရှင်းပြသည်မှာ
"ထာ၀ရဘုရား၏ ပညတ်တော်(၁၀)ပါးကို လက်၌ကိုင်ဆောင်ထားသော မောရှေကို မျှော်လင့်မထားဘဲ ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်၏။ "တောက်လောင်နေသောမီးလျှံမျက်လုံးနှင့် အကျွန်ုပ်အား နေရာအနှံ့ တစ်ဘက်မှတစ် ဘက်သို့ ရှာဖွေနေဟန်နှင့် အကျွန်ုပ်ကို ကြည့်နေသည်။ ထိုသူက ဘုရားသခင်၏စကား(၁၀)ခွန်း ပညတ်တော်(၁၀)ပါးကို ဖတ်ကြည့်ပါဟု မိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပညတ်တော်တစ် ပါးချင်းစီဆက်နွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်အား သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်မှာ ရှုတ်ချပြစ်တင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြ၏"
ထိုအထိအတွေ့က သူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ အပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာသာတရား ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းနှင့် ကောင်းမှုကိုသိုလ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဟူသောအသိ သိမြင်ခဲ့ သည်။ လူငယ်စပါဂျန်သည် အလွန်စိတ်မချမ်းမသာစွဲနဲ့ ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ သူသည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် ရှာ ဖွေခဲ့သည်။ သိသော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုခြင်းငှါ မိမိ၏ကြိုးစားအားထုတ် သမျှသည် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အဆုံးမှာ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း အသက်တာရရှိဖို့ "အဆင့်လေးဆင့်ကို ခြေလှမ်းရပါမည်။"
IV. စတုတ္ထဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုထံသို့ မိတ်ဆွေလာရမည်။
စပါဂျန်သည် အပြစ်ကို နားလည်သဘောပေါက်သောအခါမှာလည်း ယေရှုဘုရားကို ရိုးရှင်း စွာယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထာ၀ရအသက် ရရှိသည်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ပါ။
"သခင်ခရစ်တော်ရှေ့မှောက်အကျွန်ုပ်မရောက်လာခင်အကျွန်ုပ်ကိုအကျွန်ုပ်ပြောသည်မှာ၊ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်၍ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ပေ။ငါ့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား၊ငါသည်ကောင်းကင်မှ တစုံတရာလုပ်ဆောင်ရဦးသည်။
သို့သော်သူသည် တစုံတရာကို မခံစားနိုင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူသည် အလွန်ပင်စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့သည်။ ကောင်းလေခြင်းဍ ထိုအရာများသည် မိမိတို့၏နည်းလမ်းမှ ဖြစ်ခွာစေပြီး ဘုရားသခင် သားတော် ယေရှုဘုရားဆီသို့ ပို့ဆောင်နေသည်မဟုတ်ပါလား။
စပါဂျန်သည် နှင်းခဲများဖုံးလွှမ်းနေသော ဘုရားကျောင်းငယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ လူအနည်းငယ်မျှသာ ထိုနေရာ၌ရှိသည်။ ပြင်းထန်သောနှင်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာပင် ထိုနေရာ၌ မရောက်ရှိပေ။ ပိန်ပိန်ပါးပါးနှင့် လူတစ်ယောက်သည် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကြုံရာကြုံရာ ကောက်ကာငင်ကာ တရားဒေသနာဟော၏။ ထိုသူက ရိုးရိုးကလေးပြောသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရားကို ကြည့်ပါဟူ၏။ကြိုးစားရုန်းကန်မှုအဆုံး စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအဆုံး စပါးဂျန်သည် ယုံကြည်ခြင်းပါလျက် ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိ၏အသက်တာ၌ ဦးစွကြည့်ခဲ့သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားသည်မှာ ငါသည် အသွေးတော်အားဖြင့် ရွှေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံရပြီ။ ကလျက် ခုန်လျက် အိမ်ကိုပြန်ပါတော့မည်။ သူသည် ရိုးရှင်းစွာဖြင့် "ယေရှုဘုရားကို ကြည့်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြင့်သာ ယေရှုထံ လာခဲ့သည်။ ကြီးမားသောပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် လူသားများ ရိုးရှင်းစွာ တွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်။ "ထိုအရာသည်" ပျောက်ဆုံးသွားသော ငါ့အပေါင်းအဖေါ် အခုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားပြီဟူ၏။
မိတ်ဆွေ ကျွန်ုပ်ဘာဆိုဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဆိုတဲ့ "ဘာဆိုဘာကိုမှ မတတ်နိုင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင် ကြည့်ပါ။
"ငါအမှန်ဆိုသည်ကား သင်တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ မရောက်ရကြ။"(ရှင်မဿဲ ၁၈း၃)
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအမေရိကတိုက်ကိုရှာဖွေအခြေချနေထိုင်သူတို့ကဲ့သို့ (ဏငူသမငာ ဏမသါမနျ) ခရစ်တော်အဖို့ အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့မှ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ လုံး၀၊ လုံး၀ သင်၏ကယ်တင် ခြင်းအမှုကိုသေချာစေပါ။ အကယ်၍သင်၏ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုသည် မသေမချာဖြစ်လျှင် "ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ မရောက်ရကြပါ(မဿဲ ၁၈း၃)"
1.	မိတ်ဆွေသည်ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာရှိသည်ဟူ၍စစ်မှန်စွာယုံကြည်ခြင်းထဲသို့ရောက်ရှိလာရမည်။ထိုဘုရားသခင်သည်အပြစ်သားတို့အပေါ်အမျက်ဒေါသတည်နေသဖြင့်ငရဲကို ကျရောက်စေပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ ခေါ်ဆောင်မည့်သူဖြစ်၏။
2.	မိတ်ဆွေ၏အပြစ်ဒုစရိုက်များသည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်စော်ကားနေသည်ဟု မိမိ အတွင်းနှလုံးသားထဲ သိနားလည်ရမည်။ ဒီလိုအသိစိတ်နှင့်မိတ်ဆွေသည် ရက်လရှည်ကြာကြာ နေ နိုင်သလို အချိန်တိုတိုအတွင်း၌လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်းထောက် ဒေါက်တာကာကန် ပြောကြား သည်မှာ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်အပေါ် ထင်ရှား(ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်)တဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်ုပ်သည် အိပ်မပျော်တဲ့ည၊ လပေါင်းချီခဲ့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်တာအတွင်းစိတ်နှလုံးသားထဲ၌ ပြင်းထန် သောဝေဒနာကို နှစ်နှစ်ခန့်လောက်သာ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ (ဒေါက်တာ စီးအယ်လ်ကာကန်ဖီ အိပ်ခ်ျဒီ၏ Fမသာ Dမေတငည အသ Dနျငါည ၂၀၀၆çစာ -၄ Whငအaksန hသကျန)
3.	မိတ်ဆွေသည် အမျက်ဒေါကလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ မိမိ၏ကောင်းမှု ကုသိုလ် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ဟု သိနားလည်ပါ။ မိတ်ဆွေ၏ အပြောအဆိုကောင်းရုံဖြင့်၊ အသိပညာအားဖြင့် လုံး၀ကူညီဖြေရှင်းလို့ မရပါ။ ထိုအရာ များ မိတ်ဆွေ၏အတွင်းနှလုံးသားထဲ သိရှိရှင်းလင်းပါ။
4.	မိတ်ဆွေသည် အသွေးတော်၏ ထူးဆန်းသောတန်ခိုးတော်အားဖြင့် အပြစ်မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် စေရန် ဘုရားသခင်သားတော် ယေရှုထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ဒေါက်တာ ကာကန်ပြောကြားသည်မှာ "ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါသေးတယ်။ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုက ချိတ်ဆက်နေသလိုပဲ ယေရှု ဘုရားကို လက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ယေရှုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့နေရပြီး လုံးလုံးလျားလျား ယေရဘုရားရှေ့မှောက် ရောက်ရှိသွားကာ ယေရှုဘုရားသည် ကျွန်ုပ်အနား အချိန် တိုင်းရှိနေသည်။ ကျွန်တော် သူ့ရှေ့မှောက်မှ အဝေးသို့ထွက်သွားခဲ့သော်လည်း ထိုနေရာ၌ပင် ကိုယ်တော်သည်ရှိနေပြီး အကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်ခြင်းအမှု ပြုနေသည်။ ဒီလိုနှင့်တည်သောအချိန်မှာ ကျွန်တော်သည် ယေရှုဘုရားအား ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ရှေ့တော်မှောက်က အဝေးသို့ ထွက်ပြေးရတော့မလား၊ သူ့အပါးသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်မှာလားဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီ။ ဆိုလိုနေသောအချိန်၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်တွင် ကျွန်တော်သည် ယေရှုဘုရားဆီသို့ ချဉ်းကပ်တိုးဝင် ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာ မိမိကိုမိမိ ကိုးစားသောသူမဟုတ်တော့ဘူး၊ ယေရှုဘုရားကို လေးလေး နက်နက် ကိုးစားလာခဲ့ပြီ ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်နေပြီ။ ၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် ရိုးရိုး လေးပင်ဖြစ် သည်။ အချိန်တိုတိုအတွင်း၌ လူသားတစ်ဦး၌ အရေးပါအရာရောက်သော အသစ်ပြုပြင်ခြင်း ပြောင်း လဲမှုဖြစ်စဉ်က အရာရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီး စစ်မှန်သောယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ခရစ်တော်နှင့်ဝေးရပ်အရပ်၌ အချိန်ကုန်ခဲ့သော ကျွန်ုပ် သည် ထိုည၌ပင် ချက်ချင်းအသက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံ ပြန်လှည့်လာခဲ့သည်။ (စီအယ်လ်၊ ကာကန်၊ အိုင်ဆီအိုင်ဒီစာ -၁၉) ထိုအဖြစ်အပျက်သည် စစ်မှန်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမည့် သူတိုင်း ကြုံတွေ့ရမည့်ဖြစ်သော အတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သင်၏အပြစ်အဖိုးအခအတွက် အသေခံပြီး သင့်အပေါ်၌တည်နေသော ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသအတွက် ကျေအေးစေခဲ့ပြီ။ ခရစ် တော်ဘုရားသည် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီး။ အဖခမည်း တော်၏ လင်္ကျာတေ်ဘက်မှာ ထိုင်နေကာ သင့်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းအဖို့ ဆုတောင်းပေး နေသည်။
"အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူ ပြန်ရှင်ကြသည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင် ၏ လင်္ကျာတော်ဖက်မှာ ခရစ်တော်သည် ထိုင်နေတော်မူရာအရပ်၌ရှိသော အထက်အရာတို့ကို ရှာကြ လော့။
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုစွဲလမ်းသောစိတ်မရှိကြနှင့်။အထက်အရာတို့ကိုသာ စွဲလမ်း ခြင်းရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား သင်တို့သည် သေသောသူဖြစ်၍ သင်တို့အသက်သည် ခရစ်တော် နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌ ဝှက်ထားလျှက်ရှိ၏ (ကောလောသဲ ၃း၁-၂)
ခရစ်တော်ဘုရားကို ကြည့်ကြလော့။ သားတော်ဘုရားကို ကြည့်ကြလော့၊ သခင်ဘုရား၏ အသွေးတော်မြတ်၌ သင်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောဆန်းစစ်ပါ။ ယောသပ်ဟက်လ် သီကုံး သကဲ့သို့
"ဘုရားသားတော် အပြစ်သားများအဖို့ ကားစင်ပေါ် အသေခံသည်ကို ယုံကြည်လက်ခံသောအပြစ်သား၌ထိုခဏတွင်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိပြီးအသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံရပြီ။ (ယောသပ်ဟက်လ် ၁၇၁၂-၁၇၆၈ အပြစ်သားယုံကြည်လက်ခံသည့်ခဏတွင်း)
ထိုအဖြစ်အပျက်သည် စပါကျန်၏အသက်တာ၌ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာကာကန်၏ အသက်တာ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သင့်အသက်တာ၌လည်း ဖြစ်ပျက်လာမည်မလွဲပါ။ မိတ်ဆွေသည် အသက်နှင့်ပြည့်စုံသော ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်ထိုသခင်၏ အသွေးကြောင့်အပြစ်မှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ခြင်းကျေးဇူးကို တွေ့ကြုံခံစားရပါမည်။
ဒေသနာတော်မသင်မှီ ဒေါက်တာ ကာရိမ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ဆုတောင်းသည်။
ပြင်ကျမိန်ခင်ကိတ်ကရိဖက်စ်မှ ဒေသနာတော်မတိုင်မှီ သီချင်းသီဆိုပေးသည်။
("အံဩဖွယ် ကျေးဇူးတော်" ၁၇၂၅-၁၈၀၇-သီကုံး)
I. ပထမ-မိတ်ဆွေသည်အခြားသောအကြောင်းကိစ္စကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ မိတ်ဆွေ၏အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်စေရပါမည်။
II. ဒုတိယ - ဘုရားသခင်တပါးတည်းရှိကြောင်း မိတ်ဆွေယုံကြည်စိတ်ချ၍ သိရှိရပါမည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၆)
III.	တတိယ - မိတ်ဆွေ၏ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ သင့်အပေါ်၌ တည်နေသည်ကို သိနားလည်ပါး (ရောမ ၈း၈ç ၂း၅၊ ဆာလံ ၇း၁၁)
IV. စတုတ္ထ - ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုဘုရားထံသို့ မိတ်ဆွေချဉ်းကပ်ရမည်။ (ကောလောသဲ ၃း၁-၂)